Darpan Nepal – सेक्स गर्नु अगाडि भुलेर पनि यी कुरा कहिल्यै नगर्नुस
सेक्स गर्नु अगाडि भुलेर पनि यी कुरा कहिल्यै नगर्नुस
यौन मानिसको एउटा अनिवार्य शारीरिक आवश्यकता हो । यो आवश्यकतालाई पूरा गर्दा वा यसलाई व्यवस्थापन गर्दा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा सानो सावधानी अपनाउँदा ठूलो समस्याबाट जोगिन सकिन्छ । सामान्य लाग्ने लापरवाहीले पनि हाम्रो शरीरमा गम्भिर संकट निम्त्याउन सक्दछ । त्यसकारण यौन सम्पर्क गर्नुपूर्व यी काम भुलेर पनि नगर्नुहोलाः
१.पिसाव नगर्नुस – मुत्रनलीमा हुने संक्रमण वा घाउको मुख्य कारण यौन सम्पर्क गर्नुअगाडि पिसाव फेर्नु भएको कुरा वैज्ञानिकले पत्ता लगाएका छन् ।। यसको वैज्ञानिक कारण छ । यौन सम्पर्कका क्रममा हाम्रो मुत्रनलीमा विभिन्न व्याक्टेरिया उत्पन्न हुने गर्दछन् । यस्ता व्याक्टेरियाका कारण मुत्रनलीमा संक्रमण वा घाउ हुने गर्दछ । तर यौन सम्पर्क गर्नुअघि पिसाव फेरियो भने यौन सम्पर्कपछि पिसाव फेरिदैन । जसका कारण मुत्रनलीमा जम्मा भएका व्याक्टेरिया त्यही रहन्छन् । यस कारण पनि यौन सम्पर्क गरेपछि मात्रै पिसाव फेर्दा राम्रो मानिन्छ जसले गर्दा मुत्रनलीमा भएका व्याक्टेरिया पिसाबसँगै बाहिर निस्कछन् ।
२. कडाखालको औषधि नखानुस- यौन सम्पर्क गर्नुअगाडि कडाखालमा औषधि प्रयोग गर्नुहुदैन । कडा औषधि प्रयोग गरेपछि औषधिका कारण हाम्रो शरीरका धेरै नलीहरु सुख्खा हुनेगर्दछन् । जसले गर्दा हाम्रो यौनाङ्गमा भएका नलीपनि सुख्खा हुनजान्छन् । विशेषगरी एलर्जीका लागि प्रयोग गरिने एन्टीहिस्टामिन भन्ने औषधी प्रयोग गर्नु निकै हानिकारक मानिन्छ । अझ महिलाले यो औषधी प्रयोग गर्ने हो भने योनी सुख्खा हुने गर्दछ ।
जसले गर्दा एकातिर यौनानन्द प्राप्त गर्न सकिन्न भने अर्कोतिर यसले लिङ्गमा पनि नकरात्मक असर पार्दछ । त्यसैले कुनै पनि औषधी खाएर यौन सम्पर्क नगर्दा नै राम्रो मानिन्छ ।
३.रक्सी पटक्कै नखानुस- मानिसहरु रक्सी खाएर यौन सम्पर्क गर्दा आफूले पूर्ण सन्तुष्टि पाउने बताउँछन् । रक्सी खाएपछि लाजपनि हट्ने र यौन क्रियाकलाप रमाइलो हुने कतिको विश्वास रहेको छ । यसमा केही सत्यता पनि छ । तर रक्सी खाएर यौन सम्पर्क गर्दा हाम्रो शरीरमा यसले कस्तो असर पार्दछ भन्ने कमैलाई थाहा हुन्छ । रक्सी खाएको बेला शरीरका नशा निकै तात्ने र तन्किने गर्दछन् ।
जसले गर्दा हाम्रो शरीरको शक्ति अनावश्यक रुपमा नष्ट भइरहेको हुन्छ ।साथै यसले शरीरको प्राकृृतिक प्रणालीमा समेत नकरात्मक असर पारिरहेको हुन्छ । अव यस्तो बेलामा यौन क्रियाकलाम गर्दा के होला भनेर एकपट सोच्नुस् त । एकातिर रक्सीका कारण र अर्कोतिर यौन क्रियाकलापका कारण हाम्रो शरीर तात्दा यसको असरलाई सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैले रक्सी खाएर यौन सम्पर्क गर्नु निकै हानिकारक मानिन्छ ।
४. गलत आकारको कन्डम प्रयोग नगर्नुस – सुरक्षित यौन सम्पर्कका लागि कन्डम प्रयोग गर्नु निकै राम्रो कुरा हो । तर लिङ्गको आकारसँग मेल खाने कन्डम प्रयोग गरिएन भने यसले समस्या समस्या पनि निम्त्याउन सक्दछ । यदि लिङ्गभन्दा ठूलो साइजको कन्डम प्रयोग गरियो भने योनीभित्र कन्डम फस्ने संभावना हुन्छ भने सानो साइजको कन्डम प्रयोग गर्दा फुट्ने संभावना हुन्छ ।
त्यसकारण लिङ्गको आकार औसत९५।१ इन्च भएमा सानो आकारको कन्डम९१।७५ इन्च चौडाइ र ६।३ इन्च लम्बाइ भएको० प्रयोग गर्नुपर्दछ । तर लिङ्गको आकार ठूलो भएमा भने ठूलो आकारको कन्डम प्रयोगमा ल्याउनुपर्दछ ।
५. सेभिङ पनि नगर्नुस – कैयौं मानिसले यौनाङ्ग सेभिङ रौं खौरने काम गरेर यौन सम्पर्क राख्न मन पराउँछन् । तर सेभिङ गर्ने वित्तिकै यौन सम्पर्क गर्दा एसटिआई९ सेक्सुअल्ली ट्रान्समिटेड डिजिजहुने संभावना बढी रहने डाक्टरहरु बताउँछन् । सेभिङ गर्दा औजारले चिथरेको वा काटेको ठाउँमा संक्रमण हुनसक्दछ भने व्याक्टेरियाको संक्रमण हुने खतरा पनि हुन्छ । यसकारण यौन सम्पर्क गर्नुअघि कि सेभिङ नै नगर्ने वा सेभिङ गरेको केही समयपछि मात्रै यौन सम्पर्क गर्नु राम्रो मानिन्छ नेपालआजबाट
Previous Postस्तन वृद्धी गर्नेदेखि मृगौला रोग नियन्त्रणसम्मको थाहा पाउनै पर्ने मेथीका १० फाईदा Next Post४ दिनसम्म बन्धक बनाएर विवाहित महिलाको ४० जनाले गरे सामुहिक बलात्कार